सर्वोच्चले देश टुक्रिनबाट जोगायो-माधव नेपाल::Online News Portal from State No. 4
सर्वोच्चले देश टुक्रिनबाट जोगायो-माधव नेपाल
काठमाडौं, २० पुस – नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनसम्वन्धी सर्वोच्चको आदेशले देशलाई ठूलो दुर्घटनामा जोगाएको बताएका छन् । साथै संशोधन असंवैधानिक भएको एमालेको दाबीलाई पुष्टि गरेको बताए । प्रेस चौतारी नेपालले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता नेपालले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ । देशलाई टुक्राउनबाट जोगाएको छ ।’
उनले संशोधन प्रस्ताव सके फिर्ता लिएर, नभए थाति राखेर चुनावमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दबाव र प्रभावमा परेर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको नेता नेपालको दाबी छ । उनले त्यसलाई रोक्न सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको नेतृत्वलाई समेत सुझाव दिए ।
आवश्यक परे त्यस कार्यमा सघाउन एमाले तयार रहेको भन्दै एमाले नेता नेपालले भने, ‘म शेरबहादुर जीलाई पनि आग्रह गर्छु, यस्तो झमेलामा नफस्नुस् । तपाईं पाको मान्छे, देश विदेश घुमेको मान्छे, यस्तो समस्या कसरी समाधान गर्ने थाहा छ, प्रचण्डलाई रोक्नुस् ।’ उनले अघि भने, ‘कसको दबावले यो प्रस्ताव आएको हो ? कसको लागि ल्याएको हो ? उहाँलाई ढाडस दिनुस् । यदि एमालेको साथ चाहिन्छ भने साथ दिन तयार छ ।’ उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि छलफल गर्न एमाले तयार रहेको पनि बताए ।